अस्ट्रेलियन शिक्षकले खोले नेपाली स्कूलमा भव्य पुस्तकालय « हाम्रो ईकोनोमी
सुरु गर्छु उनीबारे अघिल्लो रिपोर्टको अन्त तिरबाट ।
यो पंक्तिकार र सिड्नीमा क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता डा. मोम विश्वकर्मासँग पुरातात्विक महत्वको देखिने भित्री पश्चिमी पुरानो बस्ती ग्लेबस्थित एक पुस्तक पसलभित्रको रंगीन क्याफेमा उनको नेपाल प्रेम सुनिरहँदा करिब दुई टन पुस्तकको कार्गो नेपाल तर्फ उड्नै लागेको थियो ।
मैले थप सोधेँ- ए ए नगरकोटमा ? उनको उत्तर थियो- एस न्यगोर्कोटमा । तर नगरकोट होइन रहेछ । यो पंक्तिकारले बढी जान्ने भएर नगरकोट भनाएको रहेछ ।
पुस्तकालय बन्ने ठाउँ त नुवाकोट पो रहेछ । हो नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाभित्र पर्ने बच्छ्लादेवी माध्यमिकको हाताभित्र ।
नयाँ पुस्तक करले केही क्षण आतिएका ग्याबिनले भने- हामी पहाडी गाउँमा सबैभन्दा ठूलो पुस्तकालय बनाउँदै छौं भन्ने सबैलाई थाहै थियो । केही हप्ताअघि नेपालतर्फ पुस्तक कार्गो गर्दा कार्गो रकम निश्चित गरिएको थियो, तर नेपाल पुग्दा म नयाँ पुस्तक करको मारमा परेँ ।
दराज, कार्पेट, फर्निचरका लागि बचाएको रकम करमा तिर्नु पर्दा निकै निरास भएँ । तर मेरो भाग्य मंगोलियन मरुभूमितिर घुमिरहेका मेरा मित्रले इमेलमा भने- साथी चिन्ता नगर म हृयामर र काँटी बोकेर काठमाडौंमा खडा छु, फर्निचर, कार्पेटलगाएत सबै-सबै खर्च म बेहोर्छु । उनले थपे- धन्य यी सहृदयी साथीको सम्मानमा यो पुस्तकालयको नाम हुनेछ- जेम्स हृयारिसन लाईब्रेरी अफ एक्सेलेन्स ।